कोलोराडो WIC एनपी जेपीएमए, इंक
तपाईंको WIC क्लिनिकमा फोन गर्नुहोस् यदि:
तपाईंसँग WIC खाद्य पदार्थ वा रकमहरूको बारेमा प्रश्नहरू छन् भने।
तपाईंलाई थाहा छ WIC स्वीकृत खाद्य तपाईं किन्न सक्नुभयो भने।
तपाईंको कार्ड हरायो, चोरी भयो वा बिग्रियो भने
१-844-234-4950 मा स्वचालित फोनलाइनमा फोन गर्नुहोस् यदि…
तपाईँलाई आफ्नो पिन (पिआइएन) रिसेट गर्न वा परिवर्तन गर्न पर्दछ भने।
यदि मेरो कार्ड हरायो वा चोरी भयो भने म के गर्नुपर्छ?
पहिले तपाईको पिन परिवर्तन गर्नुहोस्, र तुरुन्तै तपाईंको स्थानीय WIC कार्यक्रममा फोन गर्नुहोस्। उनीहरूले अरूको तपँको खाद्य लाभहरू प्रयोग गरेर रोक्नेछन् र तपाइँलाई नयाँ कार्डले मद्दत गर्नेछ।
तपाईंको कार्डको पछाडि पट्टि भएको टोल फ्रि नम्बरमा वा तपाईंको स्थानीय WIC कार्यक्रममा फोन गर्नुहोस्।
कहिलेकाहीं मेरा फाइदाहरू प्राप्त गर्छन्?
WIC कार्यालयमा लोड गरिएका खाद्य लाभहरू तुरून्तै उपलब्ध हुनेछ। तपाईंको भविष्यमा तपाईंको eWIC कार्डमा सुरु मितिको मध्यरातमा राखिनेछ र अन्तिम मितिको मध्यरातमा ती लाभ हुन हुनेछन्।
तपाईको eWIC कार्ड सुरक्षित राख्नुहोस्! तपाईंको सम्पूर्ण WIC खाद्य पदार्थहरू खरीद गरिसके पछि पनि, तपाईंको कार्ड पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईंको लाभहरूको आगामी सेट त्यही कार्डबाट खरीद गरिनेछ।
म यदि तपाईंको कन्नेल आफैंलाई गर्न सक्दछु र साईनलाई किनमेल गर्छु?
यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने अरू कसैलाई किनमेल गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ तिनीहरूलाई आफ्नो eWIC कार्ड र पिन दिन सक्नुहुन्छ। तर सो व्यक्ति विश्वासपात्र भएको कुरा निश्चित गर्नुहोस्!
यदि सबै WIC खाद्य खरीद गरिएन भने के हुन्छ? के ती लाभहरू अर्को महिना मा सर्न्छ?
अहँ, प्रयोग नगरिएका लाभहरू अन्तिम मितिमा हुन सक्छ।
एनफ्यामिल कहाँ किने?
भण्डार पत्ता लगाउनुहोस्
तपाईंको ब्यालेन्स जाँच गर्ने
तपाईँले आफ्नो अकाउन्टको ब्यालेन्स धेरै तरिकाले जाँन सक्नुहुन्छ:
WICShoppere एपमा "मेरो लाभहरू (मेरा लाभहरू)" विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
किराना स्टोरको क्यासियरलाई भेट्नुहोस् वा तपाईंको ब्यालेन्सको प्रिन्ट आउट लिनका लागि ग्राहक सेवा डेस्कमा जानुहोस्।
ब्यालेन्स बुझ्नका लागी आफ्नो eWIC कार्डको पछिल्ला टोलफ्रि नम्बरमा फोन गर्नुहोस्।
आफ्नो ब्यालेन्स हेर्नु र प्रिन्ट गर्नका लागि www.ebtedge.com मा जानुहोस्।
तपाईंको ई डब्ल्यूआईसी कार्डबाट किनमेल गर्न
आफैलाई कुरा गर्नुहोस् खरीद गर्नुहोस्। तपाईं सबै खाद्य एकै पल्ट खरीद गर्न पर्दैन!
बाहिर निस्कने समयमा तपाईंको कार्ड तयार राख्नुहोस्।
विनिमयको सुरुमा आफ्नो eWIC कार्ड स्वाइप गर्नुहोस्।
तपाईँको पिन राख्नुहोस् र किप्याडमा इन्टर बटन थिच्नुहोस्।
केसियरले तपाईंको खानाहरू हेर्नेछन्।
स्वीकृत खाद्य पदार्थहरूको राशि र तपाइँले गरे गर्नुभएको फलफूल र सागसब्जीहरूको डलर रकम तपाईंको WIC अकाउन्टबाट घटाइनेछ।
क्यासियरले तपाईंलाई एक रसीद दिनेछ जुन बाँकी लाभहरूको ब्यालेन्स र लाभहरू हुन सक्ने मिति देखाउनेछ।
अन्य कुनै किसिमको भुक्तानीको लागि आफ्नो eWIC कार्ड स्वाइप गर्नुहोस्।
बाँकी रहेको कुनै पनि ब्यालेन्स नगद, EBT, SNAP वा भुक्तानीको अन्य रूप बाट भुक्तानी गर्न सक्नेछ
पिन (पर्सनल इडेन्टिफिकेसन नम्बर) के हो?
पिन चार अङ्कको गोप्य नम्बर हो, जसले कार्डसँग, तपाइँलाई WIC लाभहरूमा पहुँच राख्दछ। पिन छनोट गर्दा, याद गर्न सक्ने सङ्ख्या चयन गर्नुहोस्, तर त्यो अरूले पत्ता नलगाउने किसिमको (उदाहरणका लागि तपाईंको आमाबाबु वा बच्चाको जन्ममिति)।
तपाईंको पिन तपाईंको कार्डमा नलेख्नुहोस्।
तपाईँको कार्ड प्रयोग नगरोस् भन्ने व्यक्ति व्यक्तिलाई पिन नदिनुहोस्। यदि कसैले तपाईंको पिन जान्दछ र तपाईंको अनुमति बिनै तपाईँको फाइदाहरू लिनका लागि तपाईँको कार्ड प्रयोग गर्दछ, ती लाभहरू प्रतिस्थापनित छैनन्।
यदि मैले मेरो पिन बिर्सिएँ वा परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने?
तपाईंको eWIC कार्ड पछि टोलफ्रिज नम्बरमा फोन गर्नुहोस्।
मैले गलत पिन इन्टर गरेँ भने के हुन्छ?
तपाईंको पिन अनुमान गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यदि चौथो प्रयास सम्म पनि सही पिन एन्टर गरिएन भने, तपाईँको पिन लक हुनेछ। तपाईंको पिन अनुमान गरेर तपाइँका खाद्य लाभहरू प्राप्त गर्न खोजीहरूबाट सुरक्षा गर्न त्यसो हो। तपाईंको अकाउन्ट अनलक गर्नका लागि मध्यरात सम्म कुर्नुहोस्, तपाईंको अकाउन्ट स्वत: अनलक हुनेछ।